Waraanni Ameerikaa Irra Hedduun Somaaliyaa Keessaa Ba’anis Hangi Tokko Turuun Ibsame
Waraanni yunaaytid Isteetis gaanfa Afriikaa keessaa akka hin bane ibsamee jira. Prezidaant Trampii fi ministriin ittisaa yeroofii kallattii kaa’aniin humnoonni US fi waaltaan ajajaa Afriikaa deebisuun gaanfa Afriikaa keessa ni buufatu jechuu dhaan ajajaan waraana Yunaayitid Isteetis kan waaltaa ajaja Afriikaa Jeneraal Stefen Townsend beeksisaniiru.
Lakkoobsi humnootii keenya kan Somaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu, kanaaf hojiin keenyaa fi murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhn.
Hidhata al Qaiydaa kan ta’e al-Shabaab irra dhiibbaa kaa’uu fi michoota keenya gaanfa Afriikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuu dhaan Yunaayitid Isteetis gaanfa Afriikaaf Somaaliyaa keessatti cicha qabdu itti fufti jedhn.
Ennaa barbachisetti yoom iyyuu tanaan naannoo kem keessatti iyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul’isnee jirra. Kunis hin jijjiiramne jedhanii, tarkaanfiin kun dhiisanii ba’uu fi tattaaffii keenya addaan kutuu utuu hin taane tattaaffii keenya gaanfa Afriikaa itti fufuuf tooftaa tolfame jedhaniiru.